जनवरी बिक्री, होशपूर्वक तिनीहरूलाई फाइदा लिनुहोस्! | बेजिया
मारिया vazquez | 09/01/2022 22:00 | समाचार
गत शुक्रबार द परम्परागत जनवरी बिक्री। 2021 बिक्री अभियानको तुलनामा बिक्रीमा सुधार ल्याउने सबै कुराले संकेत गर्छ र जसमा हामी निश्चित छौं कि तपाईंहरू मध्ये धेरैले पहिले नै झुक्किइसक्नुभएको छ, के हामी गलत छौं?
अरूले ठीकसँग बिक्रीमा उपस्थित नभएकाले तपाईंले फाइदा लिनुहुनेछ ठूलो छुट डिसेम्बर र जनवरी महिनाहरूमा। र के बिक्रीको विकेन्द्रीकरण एक प्रवृत्ति हो जुन हालका वर्षहरूमा हामीसँग छ। दुबै ती उत्पादनहरू प्राप्त गर्नका लागि उत्कृष्ट विकल्प हुन् जुन हामीलाई धेरै किफायती मूल्यमा चाहिन्छ, तथापि, सबै कुरा जाँदैन!
पसलहरूले पहिले क्रिसमस उपहारहरूको मागको फाइदा उठाउँछन् र त्यसपछि बिक्रीको सहारा लिन्छन् औपचारिक रूपमा जनवरी7मा सुरु हुन्छ, राजाहरूको दिन पछि। र यद्यपि धेरै पसलहरूले एक हप्ता अघि केही छुटहरू प्रवर्द्धन गर्न थाले पनि, यो अझै पनि मिति हो जसमा हामी आधिकारिक रूपमा बिक्रीको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं।
1 बिक्रीको फाइदा लिनको लागि कुञ्जीहरू
1.1 तपाईले खर्च गर्न सक्ने भन्दा बढी खर्च नगर्नुहोस्।
1.2 बचत गर्न मूल्यहरू पालना गर्नुहोस्
1.3 खरिद सर्तहरू जाँच गर्नुहोस्
1.4 टिकट राख्नुहोस् र दाबी गर्नुहोस्
बिक्रीको फाइदा लिनको लागि कुञ्जीहरू
र बिक्रीको फाइदा लिनको लागि कुञ्जीहरू के हुन्? बिक्री केही पसलहरूमा 50% छुट भन्दा बढी आउँछ, त्यसैले तिनीहरू छन् हामीलाई वास्तवमै के चाहिन्छ किन्न धेरै सुविधाजनक। जे होस्, छुटहरू हामीलाई किनमेल जारी राख्न प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिबाहेक केही होइन जसमा पतन गर्न धेरै सजिलो छ। यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र निम्न सुझावहरूको साथ बिक्रीको फाइदा लिनुहोस्।
तपाईले खर्च गर्न सक्ने भन्दा बढी खर्च नगर्नुहोस्।
बिक्रीको लागि राम्रो समय हो थप खर्च नगरी किन्नुहोस्। यद्यपि, यदि तपाईंले छुटको तथ्यको लागि केही वस्तुहरू किन्नुभयो भने, बिक्रीमा लाग्ने बचतहरू समाप्त हुनेछन्। अनि कसरी बच्ने ?
एउटा सूची बनाउनुहोस् तपाईलाई के चाहिन्छ पहिले।
अघिल्लो सूचीलाई विचार गर्दै, तपाईंले त्यस्ता उत्पादनहरू र तपाईंको वित्तीय अवस्थाको लागि तिर्न सक्ने मूल्य बजेट सेट गर्नुहोस् र यसलाई सम्मान गर्नुहोस्.
प्राथमिकता दिनुहोस्। यदि बजेटले तपाईंलाई आफूले चाहेको सबै चीजहरू किन्न अनुमति दिँदैन भने, सबैभन्दा आवश्यक कुरालाई प्राथमिकता दिनुहोस्।
बचत गर्न मूल्यहरू पालना गर्नुहोस्
के तपाइँ साँच्चै बिक्रीमा एक निश्चित वस्तु खरिद गरेर पैसा बचत गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो छुट वस्तुहरू सम्झनुहोस् आफ्नो मूल मूल्य देखाउनु पर्छ छुटको छेउमा, वा स्पष्ट रूपमा छुटको प्रतिशत संकेत गर्नुहोस्। यद्यपि यदि तपाइँ वास्तवमै तपाइँको लागि ठूलो लगानीको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै चीज किन्न चाहनुहुन्छ भने, आदर्श भनेको तपाइँले लेख पछ्याउनु भन्दा महिनौं अघि र नोट गर्नुहोस् कि तपाइँ वास्तवमै यसको लागि कम तिर्दै हुनुहुन्छ कि भनेर थाहा पाउनको लागि यसको मूल्य कसरी उतार-चढाव हुन्छ।
खरिद सर्तहरू जाँच गर्नुहोस्
केही प्रतिष्ठानहरूमा खरिद अवस्था फरक हुन सक्छ बिक्री अवधि मा। तिनीहरूले क्रेडिट कार्ड भुक्तानीहरू स्वीकार नगर्न सक्छन्, परिवर्तनहरूको लागि नयाँ सर्तहरू स्थापना गर्न वा फिर्ता स्वीकार नगर्न सक्छन्। तिनीहरूले गर्न सक्छन्, तर ती सर्तहरू स्पष्ट रूपमा भनिएको हुनुपर्छ। जब शंकामा, तिनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस्!
के परिवर्तन हुनु हुँदैन बिक्री पछि सेवा र वारेन्टी आवेदन। यी, तपाईले बिक्रीको समयमा वा त्यो अवधि बाहिर उत्पादन किन्नु भए पनि, समान हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई मूर्ख बनाउन नदिनुहोस्!
टिकट राख्नुहोस् र दाबी गर्नुहोस्
टिकट राख्नुहोस् तपाईंले गर्नुभएका सबै खरिदहरूको यदि तपाईंलाई विनिमय, फिर्ता वा दावी फाइल गर्न आवश्यक छ भने। र यदि तपाइँ कुनै वस्तु परिवर्तन गर्न वा फिर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई यसको बक्समा राख्नुहोस्। सबै प्रतिष्ठानहरूले तपाइँको पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन, तर धेरैले तपाइँलाई यो आदानप्रदान गर्ने वा यसको मूल्यको लागि स्टल प्राप्त गर्न पसलमा पछि खर्च गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ।
बिक्रीको समयमा उपभोक्ताको रूपमा तपाईंसँग वर्षको कुनै पनि समयमा समान अधिकार हुनेछ। यदि त्यहाँ समस्या छ र यसलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान गरिएको छैन भने, तपाइँसँग सधैं विकल्प हुनेछ दावी पानाको लागि सोध्नुहोस् र यसमा तपाइँको गुनासो वा तपाइँको गुनासोहरू प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्।
मा किनमेल विश्वसनीय प्रतिष्ठानहरू र यी सुझावहरू पछ्याएर तपाईंले स्वस्थ तरिकाले जनवरीको बिक्रीको आनन्द लिन सक्षम हुनुहुनेछ, बुद्धिमानीपूर्वक किनमेल गर्नुहोस् र थप खर्च गरेपछि पछुताउनु पर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » जनवरी बिक्री, होशपूर्वक तिनीहरूलाई फाइदा लिनुहोस्!